စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်လေဆိပ်သို့ချက်ချင်းဝင်ရန်တန်းစီစောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်အချိန်ကုန်လိုက်သောအရာများလေဆိပ်သို့သွားသောယာဉ်ကြောများသည်စီးပွားရေးခရီးသွားများအတွက်ကောင်းစွာသိထားကြသည်. သင်ရထားဖြင့်စီးပွားရေးခရီးတိုသို့သွားမည်၊ များသောအားဖြင့်ကြာမြင့်မည့်ခရီးတိုများရှိပါစေ…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ရထားသွားလာကြဘူး? မီးရထားခရီးသွားလာလျှော့ပေါ့ဖြစ်ပါတယ်, သည်အခြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများရိုးရှင်းစွာမကိုက်ညီနိုင်မလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုလူမှုရေးရှုထောင့်. သို့သျောလညျး, မသန်စွမ်းခရီးသွားအချို့မှစိတ်ညစ်စရာရှိနိုင်ပါသည်. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ပျော်စရာကိုမပျော်နိုင်ဟုမဆိုလိုပါ, သော်လည်း. ဤဆောင်ပါး…